Kudya kweAtkins - Kudya Kunotenderwa uye Kusingatenderwe | Kudya kweNutri
Kudya kweAtkins ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa mashoma ekudya madiki aripo uye ane kuita kwekudya yakaderera mumahydrohydrate. Avo vanodzivirira chikafu ichi, vanosimbisa kuti munhu anosarudza kutevera chirongwa ichi, anogona kuora muviri kudya zvese mapuroteni nemafuta aunoda, chero bedzi iwe uchidzivirira chikafu chine makabhohaidhiretsi.
Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti yakaderera makabhohaidhiretsi kudya zvinoshanda chaizvo kana zvasvika pakurasikirwa nehuremu uye kuti hazviite njodzi huru dzehutano.
Kudya kweAtkins kwakagadzirwa uye kwakagadziriswa naDr. Robert C Atkins muna 1972, paakafunga kutsikisa bhuku raakavimbisa kuora muviri kutevera nhevedzano yenongedzo uye nemhedzisiro inoshamisa yekupedzisira. Kubva panguva iyoyo, akave mumwe we kudya kwakakurumbira pasi rese kusvika nhasi.
Atkins chikafu chekutanga
Pakutanga kudya uku kwakashoropodzwa zvakanyanya nevakuru vehutano panguva iyoyo, nekuti yaikurudzira zvakanyanya kudyiwa kwe Mafuta akaguta. Zvidzidzo zvinotevera zvakaratidza kuti mafuta akazara haana kana kukuvadza kune hutano hwevanhu.
Izvo zvave zvichiratidzwa kuti kiyi yekubudirira mukurema kwekudya kwekudya izvo yakaderera mumahydrohydrate Imhaka yekuti nekudya zvakawanda mapuroteni, munhu anogutsa chishuwo chake zvakanyanya uye anopedzisira ave kudya zvakanyanya mashoma macalorie iyo inobatsira iyo inodikanwa kurasikirwa uremu.
1 Izvo zvikamu zvina zveAltkins kudya
2 Chikafu chekudzivirira pane chikafu cheAtkins
3 Chikafu iwe chaunogona kudya zvakachengeteka pane iyo Atkins chikafu
4 Zvinwiwa pane chikafu cheAtkins
5 Chaiwo kudya kwevhiki rimwe chete paAtkins chikafu
Izvo zvikamu zvina zveAltkins kudya
Chikafu chakakurumbira cheAtkins chakakamurwa muzvikamu zvina zvakasiyana:
Iyo induction chikamu: Mumazuva ano ekutanga echirongwa ichi chekudya unofanira kudya zvishoma pane 20 gramu emakabhohaidhiretsi pazuva kwezve vhiki mbiri. Unogona kudya chikafu chine mafuta, mapuroteni, uye miriwo yakasvibira. Muchikamu chino unorasikirwa huremu hwakawanda.
Chikamu chekuenzana: Muchikamu chino vanowedzerwa zvishoma nezvishoma mamwe marudzi echikafu kupa muviri muviri. Unogona kudya nzungu, yakaderera-carb miriwo, uye zvidiki michero.
Chikamu chekugadzirisa: Muchikamu chino munhu wacho ave padhuze nekuwana uremu hwako hwakanaka saka unogona kuwedzera mamwe makabhohaidhiretsi pane chikafu chako uye zvishoma nezvishoma kuonda.
Chikamu chekuchengetedza: Muchikamu chino chekupedzisira munhu anogona kudya macabohydrate izvo muviri wako unoda pasina kutora chero huremu.
Vamwe vanhu vanotevera rudzi urwu rwechikafu svetuka iyo induction chikamu zvachose uye sarudza kuisa yakawanda michero nemiriwo mune chikafu. Iyi sarudzo yekupa inoshanda zvakanyanya pakuwana chinangwa chaunoda. Pane zvinopesana, vamwe vanhu vanosarudza kugara muchikamu chekunyorwa nekusingaperi, inozivikanwa se iyo ketogenic kudya kana yakaderera kwazvo muma makabhohaidhiretsi.
Chikafu chekudzivirira pane chikafu cheAtkins
Kune akatiwandei ezvikafu izvo unofanira kudzivisa kudya paunenge uri pakudya kweAtkins:
Chero mhando ye shuga iyo inosanganisira zvinwiwa, zviwitsi, ice cream kana muto wemichero.
Hapana chekudya zviyo segorosi, rye kana mupunga.
ari mafuta emiriwo seya soya kana chibage zvakarambidzwa zvachose.
Frutas nehupamhi hwemakabohydrate akadai semabhanana, maapuro, maorenji kana mapere.
ari nyemba senge nyemba, nhova kana bhinzi zvinosanganisirwawo pachikafu ichi.
Starch haifanire kudzivirirwa futi, saka mbatatisi haungagoni kuzvidya.
Chikafu iwe chaunogona kudya zvakachengeteka pane iyo Atkins chikafu
Tevere ini ndicha tsanangura izvo zvekudya kana uchikwanisa kudya mune iyi mhando yezvikafu zvishoma.
Inotenderwa idya nyama dzakadai semombe, nyama yenguruve, huku kana turkey.
Hove uye chikafu chegungwa kunge salmon, tuna kana sardines.
Chikafu chine hutano se mazai unogona kuzviisa mune chikafu ichi.
Miti yakasvibira yemashizha Izvo zvinosanganisirwa kuti iwe ugone kuve nesipinachi, broccoli kana kare.
Chero mhando ye nzungu senge maamondi, walnuts kana mbeu yemanhanga zvinobvumidzwa zvizere.
Hutano mafuta yemhando yemamwe maorivhi emhandara emafuta.
Zvinwiwa pane chikafu cheAtkins
Zvinwiwa izvo vanobvumirwa pane kudya kweAtkins kunotevera:
Pakutanga Mvura, iyo inokodzera kuve izere nemvura uye kubvisa chepfu.
The coffee Iyo inobvumidzwa nekuti yakafuma mune antioxidants uye ine hutano kwazvo kumuviri.
Chimwe chinwiwa chinobatsira kwazvo kune hutano uye icho chikafu cheAtkins chinobvumidza iri green tii.
Panzvimbo iyoyo iwe unofanirwa kudzivirira zvinwiwa zvine doro uye iwo ane akawanda makabhohaidhiretsi sedoro.
Chaiwo kudya kwevhiki rimwe chete paAtkins chikafu
Pazasi uye kuti zvijeke, ndinokuratidza muenzaniso wezvaingave zvakaita kudya kwevhiki nevhiki pane chikafu cheAtkins. (Induction chikamu)
Muvhuro: pakudya kwemangwanani vamwe mazai nemiriwoKwekudya kwemasikati saradhi yehuku pamwe nemawoko mashoma uye pakudya chikafu chemanheru nemiriwo.
Chipiri: Mazai ane bhekoni pakudya kwemangwanani, huku nemiriwo zvakasara kubva husiku hwapfuura uye husiku pakudya kwemasikati cheeseburger uye miriwo
Chitatu: panguva yekudya kwemangwanani unogona kudya imwe omelette nemiriwo, panguva yekudya kwemasikati saradhi uye usiku nyama yakakwizwa nemiriwo.
China: Mazai nemiriwo pakudya kwemangwanani, zvasara kubva pakudya kwemanheru ezuro masikati, nekudya kwemanheru salmon ine bota nemiriwo.
Chishanu: pakudya kwemangwanani bhekoni nemazaiKwemasikati, saradhi yehuku ine mawandnuts mashoma uye nyama dzekudya nemiriwo yekudya kwemanheru.
Mugovera: Kwekudya chamangwanani omelette nemiriwo, kwemasikati mabara enyama akasara kubva husiku hwapfuura uye nekudya kwemanheru vamwe nyama yenguruve zvimedu nemiriwo.
Svondo: mazai nebhekoni zvekuseni, nyama yenguruve chops yekudya kwemanheru uye kwemanheru yakabikwa huku mapapiro nemiriwo.
Ndinovimba ndatsanangura kusahadzika kwese pamusoro kudya kweAtkins, inzira ine hutano uye inoshanda yekudzora huremu uye kubudirira chimiro chaidiwa. Heino vhidhiyo inotsanangudza kuti zvese zvijekeswe nezve kudya kweAtkins.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Utano » Kudya kweAtkins
MARIA VILLAVICENCIO OLARTE akadaro
Ndiri kuonga kubudirira kwavanondipa maererano nechikafu ichi, icho chandinoronga kuchishandisa, sezvo ndichirema mita imwe nemasentimita gumi nematanhatu uye ndinorema makirogiramu zana nematanhatu uye ndinonzwa kurwara. Unogona kudya mukaka wemombe.
Pindura MARIA VILLAVICENCIO OLARTE
hapana mukaka, edza kudzivirira bacon, kunyangwe iwe uchigona kuidya ichasimudza cholesterol yako, a, unoitora zuva asi kwete nguva dzose, unogona kuzvibatsira nekutora majuzi akadai sekristaro yakajeka uye gelatin isina shuga uye isina carbs, rangarira kuti iwe unogona kutora anosvika magiramu makumi maviri e carbs pazuva, saka kana chimwe chinhu chiine 20 kana 1 gramu pakushanda, usafunge nezvazvo zvakanyanya uye udye, iwe uchazoda kunzwa kuti iwe uri kunwa chinhu chinotapira. Tsvaga pa internet kuti ndeapi mashuga ezvekudya aunogona kutora uye huwandu hwe carbs iyo chikamu chekudya chine, ini ndinokurudzira iwe utenge bhuku nekuti zvese zviripo.
MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO akadaro
dairy uye chizi zvinotenderwa mukudya
Pindura kuna MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO
wendy ainyudza madziro akadaro
Unogona kudya avocado uye mukati memichero rwiwa nepapaya uye ndeupi rudzi rwezvigadzirwa zvemukaka uye chezi zvaunogona kudya, ndatenda
Pindura kune wendy drain madziro
Maitiro ekugadzira yekumba yekuchenesa mask
Zvibereko zvekudya kurwisa kupererwa neropa